PDF ဖိုင်မှ CSV ဖိုင် - Pdf.to
သင့် CSV PDF ကိုပြောင်း
အားလုံးအပ်လုဒ်များနှင့် downloads, 256-bit မှာ SSL ကိုလျှို့ဝှက်ကုဒ်သုံးပြီး encrypt လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်, သင့် CSV နှင့် PDF documents တွေကနေဒေတာတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်မှဖြစ်ပေါ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
PDF ဖိုင်မှ CSV ကိုချက်ချင်းပြောင်း
ကျနော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုစတင်စိုးရိမျတစောင့်ဆိုင်းစက်ရုပ်တစည်းရှိသည်။ အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ဆိုပါကသူတို့တစ်တွေတန်းစီစတင် overwhelemed ရ။ ကျနော်တို့စက်ရုပ်တွေအများကြီးရှိသည်လုပ်ပေးကတည်းကဤသည်လျင်မြန်စွာလှုံ့ဆော်ပေး။
အိတ်ဆောင်စာရွက်စာတမ်း Format ကို (PDF)
အိတ်ဆောင်စာရွက်စာတမ်း Format ကိုကိုစာသားပုံစံချပေးနှင့်ပုံများ, လျှောက်လွှာဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုထုံးစံလွတ်လပ်သောအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် operating system မြားအပါအဝငျစာရွက်စာတမ်းများ, တင်ပြနိုင်ရန် 1990 ခုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖိုင်တစ်ဖိုင် format တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
သင်ပြုသမျှအားလုံးသည် Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီးသို့မဟုတ်သင်ပြောင်းလဲချင်သောဖိုင်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖို့ဧရာမမီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုခြေလှမ်းများအတွက်ပြီးနောက်။
သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများရှိပါက hello@pdf.to ဖို့ကိုအီးမေးလ်ပို့
အွန်လိုင်း PDF ဖိုင်တစ် CSV ကိုပြောင်းဖို့ကိုဘယ်လို
1. တစ်ဦး CSV ဖိုင်, Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီးပြောင်းသို့မဟုတ်ဖိုင်ကို upload လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပ်လုဒ်ကိုဧရိယာကိုနှိပ်ပါ
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ tool ကိုအလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ CSV ဖိုင်တစ်ဦးကို PDF ဖိုင်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်
4. ထိုအခါသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာရန် PDF ဖိုင်ရယူရန်ကယ်ဖို့ဖိုင်ကိုဖို့ download link ကို click နှိပ်ပြီး
64,178 2019 ခုနှစ်ကတည်းကစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများ!